ပဲခူး-ဟံသာဝတီ-ရန်ကုန်အနောက်တောင်ပိုင်း လမ်းကွန်ယက်နှင့် မြို့ပြစီမံကိန်း အသစ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆွဲပြီးစီးမှုအား KOICAမှ လာရောက်တင်ပြ - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ - Bago Regional Government
Home / တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ / စက်မှု ၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / ပဲခူး-ဟံသာဝတီ-ရန်ကုန်အနောက်တောင်ပိုင်း လမ်းကွန်ယက်နှင့် မြို့ပြစီမံကိန်း အသစ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆွဲပြီးစီးမှုအား KOICAမှ လာရောက်တင်ပြ
ပဲခူး-ဟံသာဝတီ-ရန်ကုန်အနောက်တောင်ပိုင်း လမ်းကွန်ယက်နှင့် မြို့ပြစီမံကိန်း အသစ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆွဲပြီးစီးမှုအား KOICAမှ လာရောက်တင်ပြ
September 25, 2017	စက်မှု ၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန, ပဲခူးမြို့နယ်, သတင်းမှတ်တမ်းများ 117 Views
စက်တင်ဘာ ၂၅ (ပဲခူး)
စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ(၂)နာရီအချိန်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ တော်ဝင်ဟံသာအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ပဲခူး-ဟံသာဝတီ-ရန်ကုန်အနောက်တောင်ပိုင်း လမ်းကွန်ယက် နှင့် မြို့ပြစီမံကိန်းအသစ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆွဲပြီးစီးမှုအား ကိုရီးယားနိုင်ငံ KOICA မှ Mr. Arm ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ လာရောက်ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ရှေးဦးစွာ Mr. Arm က စီမံကိန်းရေးဆွဲထားရှိမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဦးစားပေးကဏ္ဍများနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ စသည်တို့ကို တင်ပြပေးသွား မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပဲခူးဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင် ၂၀၄၀ တွင်ဖြစ်ပေါ် လာမည့် လူဦးရေ၊ စက်မှု/လက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး စသည့် အခြေခံအချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲရပါကြောင်း၊ ပဲခူးတိုင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေးအရ လမ်းဆုံမြို့နေရာဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိပါ ကြောင်း၊ ဒီစီမံကိန်းအား Y ပုံစံဖြင့် ရန်ကုန်တောင်ပိုင်း၊ ပြည်လမ်းနှင့် ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်း များအား အခြေခံရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပဲခူးဒေသအား မြို့ပြစီမံကိန်းအသစ်(၂)ခုနှင့် စက်မှုဇုန် စီမံကိန်း(၂)ခုလည်း ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားပါကြောင်း၊ ယခုရေးဆွဲသည့် စီမံကိန်းသည် ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ မြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံများမှ အားသာချက်များကို အခြေခံပြီး ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်၍ ပဲခူးဒေသတစ်ခုအတွက်သာမက နိုင်ငံတစ်ခုလုံးအတွက် အလွန်ရေးပါသည့် စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ မိတ်ဖက်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်၍ ဒေသဖွံဖြိုးရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ODA ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း(၁၀၀၀)လျာထားပါကြောင်း တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ထို့နောက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးတိုးဝင်းက ဟံသာဝတီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် အဝင်လမ်း၊ သီလဝါ-ခရမ်း-ပဲခူးလမ်းအား ADB မှ ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းအခြေအနေ၊ ရန်ကုန်ဘူတာနှင့် ဟံသာဝတီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် မည့် အမြန်လမ်းသစ်၊ ဟံသာဝတီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သည် နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းဖြစ်သော်လည်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ကော်မတီ(၃)ရပ်ဖွဲ့စည်းပြီး စီမံကိန်းအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်သည့် အခြေအနေ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ၁၉၇၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်ခန့်က ကြုံတွေ့ နေရသည့် မြေယာပြဿနာနှင့် ကျူးကျော်လူနေထိုင်မှုအခြေအနေများအား မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခံစားရ လျက်ရှိ၍ ပြည်သူများအတွက် အိမ်ယာများဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများကိုလည်း ကူညီဆောင်ရွက် ပေးစေလိုကြောင်းနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် (၁)နှစ်တစ်ကြိမ် စီမံကိန်းPlan ရေးဆွဲတင်ပြရသဖြင့် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းPlanများ ရေးဆွဲရာတွင် KOICA မှ တင်ပြသည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်း များ ထည့်သွင်းရေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းနောက် စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးသန်းဝင်းက ပဲခူးဒေသ အား ကုန်းလမ်းနှင့် လေလမ်းကြောင်းများ ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မည့် စီမံကိန်းအပြင် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ စစ်တောင်းမြစ်၊ ပဲခူးမြစ်နှင့် ပဲခူး-စစ်တောင်းတူးမြောင်းတို့ကို ပြန်လည်အဆင့်မြှင့် တင်ပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု စသည့်အချက်အလက်များ ပါဝင်စေလို ကြောင်းနှင့် ယခုလို ပဲခူးဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စီမံကိန်းများရေးဆွဲတင်ပြပေးသည့် KOICA မှ တာဝန်ရှိသူများအားလုံး ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်ပြီး တက်ရောက်လာသည့် ဌာနဆိုင်ရာများမှ တင်ပြဆွေးနွေးရာ၊ KOICA မှ တာဝန်ရှိသူများမှ ပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီး၊ စက်မှု၊လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးမှ KOICA အဖွဲ့များ အမှတ်တရလက်ဆောင်ပန်းချီကား ပေးအပ်သည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ စက်မှု၊လျှပ်စစ်၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။